မမှန်ကန်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ပြည်သူကို အကျိုးယုတ်စေမည့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါက ယှဉ်ပြ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော် မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းမောင် က”စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင် ရာမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချင်း ချင်း ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကိုပြောတာ။ သဘောကတော့ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း သက်သက် ဒီဥပဒေကတားဆီး ခြင်း ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဘယ် ဟာကိုမှတားနိုင်မလဲဆိုရင် ဈေး ကွက်အတွင်း မတော်မတရားမမှန် ကန်သော နည်းလမ်းတွေမသင့် လျော်သော နည်းလမ်းတွေ တစ် နည်းအားဖြင့် အများပြည်သူကို အကျိုးယုတ်စေမယ့်အချက်တွေ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပေါ်လာရင် ဒီဥပဒေကတားမြစ် မှာပဲဖြစ်ပါတယ်”ဟုယင်းအခမ်း အနားတွင်ပြောသည်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ”၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့မြန်မာ နိုင်ငံ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေမှာ အပ်နှင်း ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အ တွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်ကိုဖွဲ့ စည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာမှာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် မျှမျှတတလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် တတ်ဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားဖို့လို အပ်သလို မိမိတို့အနေနဲ့ စီးပွား ရေးအရ အနိုင်ကျင့်မခံရအောင် တစ်ဖက်သားကို အနိုင်မကျင့်အောင် ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ရောက် လာဖို့အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မ ရှင်နဲ့ ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြမလဲ။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဥပဒေနဲ့ အညီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ဘယ်လို ဆောင် ရွက်ကြမလဲဆိုတာ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ရောင်းဝယ်သူ၊ စားသုံးသူများ၊ အစိုးရများနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံး အပြန်အလှန်အကျိုးရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ ပြော ချင်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ထားရှိသည့် မူဝါဒများကို နားလည်မှု အားနည်းသည့်အတွက် ပို့ကုန်များ တင်ပို့ရာတ??
မန္တလေး အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး နှလုံးရောဂါ အထူးကုဌာနတွင် ခြောက်နှစ်အတွင်း အရေးပေါ် နှလုံ??